Midowga Musharaxiinta oo iska diiday codsigii Madaxweyne Farmaajo | Dhacdo
Home Wararka Maanta Midowga Musharaxiinta oo iska diiday codsigii Madaxweyne Farmaajo
Midowga Musharaxiinta oo iska diiday codsigii Madaxweyne Farmaajo
Golaha Midowga Musharaxiinta ayaa Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku gacan-seyray wadahadal uu ugu baaqay inay xaaladda dalka ka yeeshaan.
Madaxweynaha Somaliya ayaa codsigiisaan u gudbiyay Midowga Musharaxiinta, isagoo markaasi ergo ahaan ugu diray Madaxweyne-yaasha Galmudug iyo Hirshabelle.
Wararka ayaa sheegaya in Madaxweynaha uu codsaday inuu la kulmo guddi ka socda Midowga Musharaxiinta, bal si ay uga wadahadlaan arrinta doorashada, gaar ahaan doodda adag ee ka dhalatay muddo kororsiga labada sano ah.
Wararka ayaa intaa ku daraya in baaqa Madaxweyne Farmaajo uu si gaar ahi ugu socday Madaxweyne-yaashii hore ee dalka, Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in Midowga Musharaxiinta ay kulankaasi u diideen, iyagoo Madaxweyne Farmaajo u aqoonsan mid muddo xileedkiisu dhammaaday, isla-markaana uu kursiga ku jooggo sifo aan sharci ahayn.
Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor), Madaxweynaha Galmudug ayaa la soo sheegaya in markale uu isku dayi doono, sidii uu u kulansiin lahaa Madaxda Dowladda Federaalka iyo Xubnaha Midowga Musharaxiinta, qaarkood.
Inkastoo muddooyinkii ugu dambeysay ay xaaladda siyaasadeed ee dalka ahayd mid hubinti la’aana ayaa waxaa sii murjisay labada sano ee loogu daray Madaxtooyada iyo Baarlamaanka, waana xilli uu kordhayo baaqyada loo jeedinayo danleyda siyaasadda ee dalka.
Previous articleGalmudug oo ka walaacsan qabsashada Shabaab ee Bacaadweyne (SAWIRRO)
Next articleCabdiraxmaan Baadiyow “Wixii aan heshiis lagu ahayn waxaa ka dhalanaya dagaal”